မဟာသင်္ကြန်အကြတ်နေ့ မြင်ကွင်း | My Diary
← The Mass Prayer in Bangladesh	WISE WORDS IN PICTURES →	မဟာသင်္ကြန်အကြတ်နေ့ မြင်ကွင်း	Apr 24
၁၃၇၂ ခုနှစ် မြန်မာ့ရိုးရာနှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ပွဲတော် အကြတ်နေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တွင် ဆင်နွဲခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံအတွင်းရှိ မြို့ကြီးများတွင် နှစ်သစ်ကူးရေသဘင်ပွဲတော်ကို စည်ကားစွာကျင်းပခဲ့ကြပြီး ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်တို့၌ ဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ်များ၊ ရေကစားမဏ္ဍပ်များဖြင့် ပျော်ရွှင်စွာဆင်နွဲခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
သင်္ကြန်အကြိုနေ့တွင် ရေကစားသူနှင့် ရေပက်ခံထွက်သူ နည်းပါးခဲ့သော်လည်း သင်္ကြန်အကျနေ့၌ ရေကစားသူနှင့် ရေပက်ခံထွက်သူများ ပြန်လည် စည်ကားခဲ့သည့် အလျောက် ယနေ့ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့တွင်လည်း ရေကစားသူနှင့် ရေပက်ခံထွက်သူများဖြင့် ဆက်လက်စည်ကားခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ရှိရာတွင် သင်္ကြန်အကြတ်နေ့က လူစည်ကားရာနေရာများဖြစ်ကြသော ကန်တော်ကြီးကန်ပတ်လမ်း၊ ပြည်လမ်းမနှင့် ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်းတို့သာမက မြို့တွင်းလမ်းများဖြစ်ကြသော အနော်ရထာလမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် မြို့နယ်အသီးသီးရှိ လမ်းမကြီးများပေါ်တွင်ပါ ရေကစားသူနှင့် ရေပက်ခံထွက်သူများဖြင့် ဆက်လက်စည်ကားခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စည်ကားသည်ဆိုရာတွင် ယခင်နေ့များကဲ့သို့ နေ့လည်ပိုင်း၊ ညနေပိုင်းတို့တွင်သာ စည်ကားခဲ့သည်မဟုတ်ပဲ နံနက်ပိုင်းမှစ၍ မဏ္ဍပ်ကြီးများရှိရာ နေရာများ၊ ဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ်များ၌ ကားဖြင့် ရေပက်ခံထွက်သူများ၊ လမ်းလျှောက်ကာ လာရောက်ကြည့်ရှုသူများဖြင့် စည်ကားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ရှေ့နှစ်ရက်ကတော့ ထွက်လည်ရ ကောင်းနိုး၊ မကောင်းနိုး စဉ်းစားနေတာ၊ ဒီနေ့တော့ မနေနိုင်တော့တာနဲ့ ထွက်လည်ဖြစ်တယ်၊ နေရာတိုင်း စည်ကားနေတ တွေ့ရတော့ ကိုယ့်စိတ်လည်း ပျော်လာတယ်၊ လုံခြုံရေးတွေလည်း နေရာအနှံ့ရှိနေတော့ အဆင်ပြေပါတယ်၊ မနက်ဖြန်လည်း ဆက်လည်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်”ဟု သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်မှ ကားဖြင့် ရေပက်ခံထွက်လာသူတစ်ဦးက ပြောပြပါသည်။
”အစည်ကားဆုံးကတော့ ဂျေမီမဏ္ဍပ်ပါပဲ။ လာတဲ့သူတွေ တော်တော်များတယ်။ ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ ထူးခြားတာကတော့ ခါးပိုက်နှိုက်ခံရတာတွေ ပိုများတာပဲ”ဟု ပြည်လမ်းရှိ အင်းလျားကန်စောင်း မဏ္ဍပ်များ၌ တာဝန်ကျသူ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောပြပါသည်။
”အရင်နှစ်က ဒီအချိန်ပေါ့ဗျာ၊ ကန်ပတ်လမ်းမှာ ဗုံးပေါက်တယ်၊ ပျော်နေတဲ့သူတွေက ပျော်နေကြပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ လည်နေတုန်း မနှစ်ကအကြောင်းတွေ ပြန်သတိရလာတော့ စိတ်ထဲ ထိုင်းမှိုင်းသွားတယ်။ အရင်နှစ်ရက်ကတော့ အိမ်ထဲမှာပဲ နေတာပါ။ ဒီနေ့တော့ သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်တာနဲ့ အပြင်ထွက်လာခဲ့တာ၊ ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်စည်ကားလာပြီဆိုတော့ မနက်ဖြန်လည်း လူပိုစည်မယ့် သဘောရှိတယ်၊ ကျွန်တော်ကတော့ မနက်ဖြန် အိမ်မှာပဲနေဖို့ စဉ်းစားထားတယ်”ဟု အလုံမြို့နယ်မှ ရေပက်ခံထွက်လာသူတစ်ဦးက ပြောပါသည် ။
ယခုနှစ်ရန်ကုန်သင်္ကြန်သည် ယခင်နှစ်များထက် မဏ္ဍပ်ကြီးများ နည်းပါးခဲ့ပြီး မိမိအိမ်ရှေ့တွင်သာ အုန်းလက်မဏ္ဍပ်များ၊ ရေတိုင်ကီများဖြင့်သာ ရေကစားကြသူများသာ ရှိခဲ့သည်။ မဏ္ဍပ်ကြီးများ နည်းပါးခဲ့သောကြောင့် ရှိသည့်မဏ္ဍပ်များတွင်သာ ကားများစုပြုံရေကစားခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
“သင်္ကြန်အကြိုနေ့နဲ့ အကျနေ့က ဘုန်းကြီးဝတ်နေတာ။ ဒီနေ့မနက်အစောကြီးထွက်ပြီး မဏ္ဍပ်မှာရေလာကစားတာပါ။ မနက်ဖြန်လည်း ဒီမဏ္ဍပ်မှာပဲ ရေကစားဦးမှာပါ”ဟု ကန်တော်ကြီးကန်ပတ်လမ်းရှိ black culture မဏ္ဍပ်တွင် ရေကစားနေသော စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှ လူငယ်တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
တာမွေမြို့နယ်မှ ကန်တော်ကြီးကန်ပတ်လမ်းသို့ ကားဖြင့် ရေပက်ခံလာသူတစ်ဦးက “ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ထက်စာရင် ဒီနေ့ ပိုစည်တယ်။ မဏ္ဍပ်မှာရေ ကစားတဲ့သူတွေနဲ့ ရေပက်ခံလာတဲ့ကားတွေလည်း ပိုများတယ်။ လုံခြုံရေးတွေလည်း မနှစ်ကထက်ပိုပြီးချထားတယ်။ မဏ္ဍပ်တွေမှာလည်း စီစီတီဗီတွေတပ်ထား တာတွေ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတချို့ရဲ့ ၀တ်စားပုံကတော့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မလျော်ညီတာကိုတွေ့ရတယ်။ တချို့ဆိုရင် တော်တော်လည်း မူးနေပုံပေါ်တယ်။ သူတို့ ရဲ့ပုံတွေကတော့ အင်တာနက်ပေါ်ရောက်ဦးမှာ သေချာတယ်”ဟု ပြောပါသည်။
ထို့အတူ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များတွင်လည်း ရေကစားကြသူများဖြင့် စည်ကားခဲ့သည်။ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီး ထိုနေရာတွင် ရေကစားသူများ၊ ရေပက်ခံသူများ၊ လာရောက်ကြည့်ရှုသူများဖြင့် စည်ကားခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ကျုံးအရှေ့ဘက်ခြမ်း နံနက် ၁၁နာရီခန့် မြင်ကွင်း
From 2011 Mandalay Thingyan – A Kya Day (14.4.2011)
From 2011 Mandalay ThinGyan – A Kyo Day (13.4.2011)
စင်္ကာပူက မြန်မာသင်္ကြန်သတင်းတွေ လာပါပြီ။ Myanmar Business Association (Singapore) ကကျင်းပတဲ့ သင်္ကြန်ဖျော်ဖြေပွဲကတော့ ပင်နဆူလာပလာဇာမှာ ဧပြီလ (၁၀)ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းကနေစပြီး ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဝင်ကြေးအခမဲ့ဖြစ်ပြီး စတုဒီသာလည်း ကျွေးဦးမှာတဲ့ခင်ဗျ။ အခမဲ့ဆိုသော်ငြားလည်း ဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုပါ တင်ဆက်ပေးမှာမို့ အဝေးရောက်မြန်မာများ အတွက်အလွမ်းပြေသင်္ကြန်ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဗွက်ပေါက်အောင်ကို ကခုန်နေကြတဲ့ စင်္ကာပူမှရွှေမြန်မာများ
(ဓါတ်ပုံဘယ်သူရိုက်မှန်းမသိလို့ credit ဘယ်လိုပေးရမှန်းမသိပါ။ ပိုင်ရှင်ပေါ်လာရင် credit တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း။)
Posted on April 24, 2011, in Cimphawng/Tuahkhak teng, Photos. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← The Mass Prayer in Bangladesh	WISE WORDS IN PICTURES →	Leaveacomment